Nitafa mivantana tamin’ny tantsaha ny Cnaps - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Zo fototra. Ny fiahiana ara-tsosialy dia zo fototra ka tokony samy hisitraka izany ny olom-pirenena tsirairay. Eto amintsika dia ny tahirim-pirenena momba ny fiahiana ara-tsosialy no nomen’ny lalàna fahefana hisahana izany ho an’ireo mpiasa eo amin’ny sehatra tsy miankina sy araka ny voalazan’ny sata mifehy ny asa sy ny lalàna an-dranomasina. Tsy mbola mahasehaka ny sehatra rehetra nefa ny fisitrahana ny zo momba ny fiahiana ara-tsosialy. Anisan’ny mbola tsy mahazo izany, ohatra ireo olom-pirenena mivelona amin’ny asa mahaleo tena sy ny amin’ny sehatr’asa malalaka. Tafiditra ao anatin’izany ny tantsaha izay efa eo am-pandinihana ny fomba hoenti-manatanteraka izany ny Cnaps. Izay indrindra no anton’izao fitafana mivantana tamin’ny tantsaha tany Anjozorobe izao nandritra ny tsenaben’ny fambolena
Nanomboka ny alarobia 19 jolay ka nifarana ny 20 jolay ny tsenabe « Avotra » tanterahina tao Anjozorobe. Nidina tany an-toerana ny ekipan’ny Cnaps notarihin’i Rasoanaivo Didier, talen’ny fenitra sy ny fikarohana, ary Rakoto Ramiarantsoa Jeanine, talen’ny fifandraisana. Tafiditra amin’ny politika fanatonana ny mponina izay efa fanaon’ny Cnaps ny hetsika amin’ny alalan’ny tranoheva sy ny velakevitra arahina fanontaniana iresahana manokana ny tontolon’ny asa fiveloman’ny tantsaha na fambolena io na fiompiana, ny fomba fanatsarana ny vokatra sy ny tontolon’ny famatsiam-bola ary ny tsena hanondranana ny vokatra. Ny tranoheva dia natao ahafahan’ireo olompirenena mamantatra misimisy kokoa momba ny Cnaps ny asa sahaniny. Tafiditra amin’izany ireo fanampiana telo momba ny fiainam-pianakaviana toy ny volan-jaza sy ny volan’ny bevohoka ary ny mpitaiza kely ; ny solo-takaitra ho an’ireo marary na tra-doza vokatry ny asa ary ny fisotroan-dronono. Nampahafantarina ny mpitsidika ihany koa ny fikarakarana ny antontan-taratasy rehetra ilain’ny mpiasa am-perin’asa raha toa ka mangataka fanampiana ary naroso nandritra ny foara ny torohevitra ho an’ireo vao hanokatra orinasa toy ny fanaovana fanambarana momba ireo mpiasa ao aminy. Ankoatr’izay dia tombontsoa amin’ny tranoheva ny fijerena ny kaonty manokan’ny mpiasa.
Fa nandritra ny velakevitra momba ny fiahiana ara-tsosialy dia nandray anjara mavitrika ireo tantsahan’Anjozorobe ; tao ny nitondra ny hetahetany sy ny faniriany ny mba ho mpikamban’ny Cnaps ka rahatrizay tonga ny fahanterana dia tsy ho vesatry ny fiarahamonina fa mba hisy ny fisotron-dronono. Fantatra fa ny mpiasa tena sy ny manao asa fivelomana malalaka dia mbola tsy iandraiketan’ny Cnaps ; araka ny lalàna velona mantsy dia ireo mpiasa amin’ny sehatr’asa ankapobeny, ny fampianarana , ny fiangonana ary ireo tantsambo ary ireo ECD amin’ny fanjakana no mpikambana ao amin’ny Tahirim-pirenena. Efa vinan’ny Cnaps kosa ny hametraka rafitra hitantana ny fisotron-dronon’ny tantsaha ary efa nisy ny fanadihadiana ifotony natao izay niarahana tamin’ny Tranoben’ny Tantsaha. Nahazo tombontsoa tamin’izao lahadinika izao ihany koa ireo mpiasa efa mikarama eny anivon’ny sehatra tsy miankina izay efa mpikambana Cnaps kanefa toa mbola tsy mahalala tsara ny momba ny lalàna mifehy ny zo ara-tsosialy. Mifarana androany moa ny tsenabe « Avotra » taty Anjozorobe.